isivumelwano: i-sony & apos; ingxolo-yokukhansela i-wh-1000xm2 i-headphone ezithengiswayo nge $ 200 kwi-amazon ($ 150)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: I-Sony & apos; ukucima ingxolo ye-WH-1000XM2 kwiifowuni ezithengiswayo ze- $ 200 kwiAmazon ($ 150 icinyiwe)
Idili: I-Sony & apos; ukucima ingxolo ye-WH-1000XM2 kwiifowuni ezithengiswayo ze- $ 200 kwiAmazon ($ 150 icinyiwe)
Isaz & apos; isidima somenzi weemveliso ezikumgangatho ophezulu azinakuphikiswa, ngakumbi xa kufikwa kumabonakude nakwiintloko. Ewe, kukho umcimbi wexabiso kwaye u-Sony akazithengisi iimveliso zayo njengexabiso eliphantsi njengezinye iinkampani, nangona uninzi lukholelwa ukuba ezinye zezixhobo zixabise kakhulu.
Siye saxela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo malunga ne-Sony & apos; XB950N1 ingxolo-yokucima ii-headphone ezingenazingcingo, ezazithengiswa eAmazon ngaphezulu kwesiqingatha. Ngoku, sinesinye isivumelwano kuwe esinokuthi sikufumanele ii-headphone ezingcono phantse isiqingatha.
I-Sony & apos; i-WH-1000XM2 ye-premium engenazingcingo yokucima ii-headphones ngoku ziyafumaneka nje ngeedola ezingama-200 kubathengisi abaninzi baseMelika, kubandakanya IAmazon kwaye Eyona Ntengiso . Zizo kanye ii-apos ze- $ 150 ikhutshwe kwi-MSRP, into eninzi kwisibini seefowuni zekhwalithi yeprimiyamu.
Iifowuni eziphathwayo azibonisi ngaphantsi kweeyure ezingama-30 zobomi bebhetri okanye imizuzu engama-70 ngemizuzu nje eli-10 yokuhlawula ngokukhawuleza. Kwakhona, banobuchwephesha bokucima ingxolo yedijithali, imowudi yokujonga ngokukhawuleza, ulawulo lokuchukumisa, kunye nenkxaso yomncedisi welizwi ehambelana nefowuni ye-Android okanye ye-iPhone.
Iifowuni zeSony WH-1000XM2 ziyafumaneka kukhetho lwemibala emibini-emnyama kunye negolide, kwaye, ngethamsanqa, zombini ezi zinto zithengiswayo zithengiswa ngexabiso elifanayo, $ 200.
Isandi sokucima ingxolo ye-WH-1000XM2 yentloko
Umthala s4 vs htc nye
t mobile ngolwesiHlanu 2019
I-samsung gear s2 vs lg urbane
Eyona ifilimu kunye neglasi ekhuselayo ekhusela i-Galaxy S9 kunye ne-S9 +
Idili: I-T-Mobile ikuvumela ukuba uthenge iifowuni ze-2 Galaxy S8 ngexabiso le-1
IDiep.io (aka Tank.io ye-iPhone) uphononongo, amaqhinga kunye nesicwangciso: le yinto entsha yokulutha emva kweSlither.io
Idili: I-iPhone 8 kunye ne-8 Plus zii-100 zeedola kwiWalmart (kunye neVerizon, AT & T, okanye iiplani zokufaka isprint)
Ngoku ungafumana i-iPhone SE yasimahla okanye i- $ 49 ye-iPhone 6s xa utshintshela kwiMetroPCS
I-Apple isika i-iPhone XR kunye ne-iPhone 8 amaxabiso, ibulala i-iPhone XS kunye ne-iPhone 7
I-UI entsha kwiVerizon / AT & T Galaxy S9 ene-Android Pie ifumana izithupha (iziphumo)
Abanye abathengi beVerizon abanako ukwenza iifowuni
Jonga izaziso zefowuni ye-Android yakho Windows 10 PC ngexesha lokwenyani
I-Apple iPhone X vs iPhone 8 vs iPhone 8 Plus